Kiiska qorshihii faafa ee Talyaanigu maqnaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Kiiska qorshihii faafa ee Talyaanigu maqnaa
Jebinta Wararka Yurub • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiirka Caafimaadka iyo qorshaha safka faafa ee Talyaaniga
Laga soo bilaabo maqnaashaha ilaa markhaatiga beenta ah iyo inbadan, qareenadu waxay dhisayaan dacwad tilmaamaysa qorshihii faafa ee talyaaniga, kaasoo ahaa wax laga yaabo inaan waligiis miro dhal noqon.
Wasiirka Caafimaadka ee Talyaaniga Speranza waxaa hoos imanaya qareennada qoysaska dhibbanayaasha COVID ee mowjaddii koowaad ee waddanka.
Agaasimihii hore ee kahortaga ee wasaarada caafimaadka ayaa sheegay in aan la sameynin qorshe saf ah oo faafa, oo aan waligiis la cusbooneysiinin.
Isu duwaha Comitato Tecnico Scientifico, guddi ka kooban 24 khabiir oo dowlada talyaaniga kala taliya cudurka aafada ayaa sheegay in aysan jirin wax qodob ah oo ku saabsan maaskarada lagama maarmaanka ah, sariiraha la siidaynayo.
Aayihii Wasiirka Caafimaadka ee Talyaaniga, Mudane Roberto Speranza, ayaa sii kordheysa oo aan la hubin hadda in xeer ilaaliyeyaasha Bergamo iyo qoysaska dhibbanayaasha laga soo bilaabo wejiga koowaad ee COVID-19 ay dib u dhis ku sameeyeen silsilad aan u hoggaansamayn wasaaradda. difaaca anti-COVID iyo waxa umuuqda qorsho faafa oo aan jirin oo Talyaniga kajira.
Ka-noqoshada, fikirka beenta ah, maqnaanshaha, ka-qaybgalka, iyo markhaatiga beenta ah
Sawirka ka soo baxa baaritaanada xafiiska dacwad oogaha Bergamo ee xasuuqii ka dhacay Val Seriana wuxuu siinayaa sawir ah u hogaansanaan la'aanta silsiladda amarka ee Wasaaradda Caafimaadka ee Talyaaniya iyada oo ay mas'uul ka yihiin ugu yaraan 3 wasiir - Beatrice Lorenzin, Giulia Grillo , iyo Roberto Speranza. Xitaa madaxbanaanida Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa hadda su'aalo la weydiinayaa, kadib faafreebkii lagu sameeyay May 2020 warbixintii ku saabsan maaraynta wejigii ugu horreeyay ee masiibo ee ay xukuumadda Conte ku tilmaamtay "mid la hagaajiyay, fowdo iyo hal-abuur leh."
Masiirka wasiirka Speranza iyo isu dheelitirka siyaasadeed ee dowlada Draghi ayaa hada qatar ku ah ku guuldareysiga la qabsiga qorshaha safka iyo ku lug lahaanshaha wasaarada caafimaadka ee ka saarida warbixinta WHO (dukumiintiga dib loo helay mahadsanidiin kooxda sharciga ee kooxda. ehelada dhibanayaasha COVID-19 oo uu hogaaminayo garyaqaan Consuelo Locati).
Qorshihii faafa ee lagu ansixiyay Shirkii Gobollada ee 2006 wuxuu ahaa mid sii jira xoog ku jooga Talyaaniga illaa 25 Janaayo, 2021.